PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - Uselinde iwindi oshikisha ibhentshi kwiPolokwane City
Uselinde iwindi oshikisha ibhentshi kwiPolokwane City
UMGADLI wePolokwane City, uThobani Mncwango, uselinde ukuvulwa kwewindi lokusayinisa abadlali langoJanuwari ukuzithukulula “emaketangweni” eRise And Shine.
UMncwango, waKwaNongoma, akakaze abonakale enkundleni kusuka kuqale isizini ka-2017/2018. Ekupheleni kwesizini edlule, bekunezindaba zokuthi ufunwa yiKaizer Chiefs neBidvest Wits kodwa iRise And Shine yenqaba ukumdedela. Kuvele ukuthi iPolokwane ibikade ifuna avuselele inkontileka kodwa wenqaba. Kusuka kuqale isizini, iPolokwane isawine umdlalo owodwa kweyisikhombisa esayidlalile.
UMncwango uthe uyabona ukuthi ufela ukwenqaba ukuvuselela inkontilela.
“Kukhona amaqembu abekade efuna ukungithenga kodwa iPolokwane yenqaba ngoba ifuna ngisayine inkontileka entsha. Angikuvumanga lokho. Ngiyajima neqembu kuze kube yimanje,” kusho uMncwango.
“Sengilinde kushaye uJanuwari ngisayine inkontileka yesibambiso nelinye iqembu. Senganele ngendlela engiphatheke ngayo lapha. Ngibuye ngibe nalo ithemba ukuthi ngizodlaliswa ikakhulukazi njengoba izinto zingahambi kahle eqenjini.”
Kumasizini edlule iPolokwane yenze okufanayo kuCole Alexander, yamhlalisa ebhentshini emuva kokuthi enqabe ukuvuselela inkontileka, efunwa yiChiefs isaqeqeshwa nguStuart Baxter. Ugcine ehambe mahhala wajoyina iSuperSport United esayiniswa uyena uBaxter.
UVukile Mngqibisa, oseyibamba kuMaZulu, ugcine ehlukane nePolokwane kungasekuhle emuva kokuthi enqabile ukusayina inkontileka entsha, efunwa yi-University of Pretoria. Ugcine esayine kuyona iTuks sekuphele inkontileka. IMaritzburg United yehlelwe okufanayo ngoPhilani Zulu osegijima kwiChiefs. Imdingisile ngoba enqaba ukuvuselela inkontileka, wagcina ehambe bhusende.
“Ngicabanga ukuthi bazovuma ukungidayisa ngoJanuwari ngoba akumnandi ukuthi umdlali ahambe mahhala. Uma kungenzeki lokho ngizohamba mahhala. Bayabona ukuthi kukhona engikuhlosile. Namanje akhona amaqembu afuna ukungisayinisa,” kusho uMncwango.